Migrant World TV မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်: မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ခရီးသွားများအတွက် E-visa အား ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်
Migrant World TV မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အတွက် သတင်းမီဒီယာဆိုဒ်
ကိုရီးယား အလုပ်သမား ဥပဒေ
2012년 3월 19일 월요일
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ခရီးသွားများအတွက် E-visa အား ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်
Sunday, 18 March 2012 16:35
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ခရီးသွားများအား ရန်ကုန်လေဆိပ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကောင်တာတွင် တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ခရီးသွားများအတွက် E-visa အား ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
E-visa စနစ်အား ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တစ်လတာကာလအား စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် စတင် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကာ ဗီဇာသက်တမ်းအား စတင် ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှရက်ပေါင်း ၃၀ ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်း သိရသည်။
E-visa စနစ်အား ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ခရီးသည်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထား နိုင်မည်ဖြစ်ကာ Tourist Visa သီးသန့်သာ ဖြစ်သည့်အတွက် ခရီးသည်များသည် ဟိုတယ်များတွင်သာ တည်းခိုရမည် ဖြစ်သည်။
“ဒီစနစ်ရဲ့ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေ၊ ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေပေါ် မူတည်ပြီး ပြင်ဆင်စရာ တွေရှိလာရင် ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် စမ်းသပ်ကာလတစ်လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်ခွင့်ပြုပေး သွားမှာပါ”ဟု ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။ E-visa လျှောက်ထားသူများသည် www.myanmarevisa.gov.mm သို့ ၀င်ရောက်ကာ ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံကြီးတွေက မြို့ကြီးတိုင်းမှာလည်း မြန်မာသံရုံးမရှိတော့ ဗီဇာလျှောက်မယ်ဆို သိပ်မလွယ်ကူဘူးလေ။ E-visa ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်တော့ အွန်လိုင်းကနေပဲ အလွယ်တကူ လျှောက်လို့ရနိုင်တာပေါ့။ အွန်လိုင်းကနေ ဗီဇာလျှောက်လို့ရမယ် ဆိုတော့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပိုပြီး မြန်ဆန်လာနိုင်မှာပါ”ဟု Myanmar Tourism Board မှ ကိုကျော်ထင်က သုံးသပ်ပြောပြခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်၌ အဆိုပါ E-visa စနစ်အား ရန်ကုန်လေဆိပ် တစ်ခုတည်းတွင်သာ စတင်ခွင့်ပြု ခြင်းဖြစ်ပြီး ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှု ပေါ်မူတည်ကာ လေဆိပ်ဝင်ပေါက် အနေဖြင့် မန္တလေး၊ ညောင်ဦး၊ ဟဲဟိုး၊ သံတွဲလေဆိပ်များနှင့် ကုန်းလမ်းဝင်ပေါက်များ အနေဖြင့် မူဆယ်ဝင်ပေါက်၊ တာချီလိတ်ဝင်ပေါက်နှင့် ကော့သောင်း ၀င်ပေါက်များတွင်ပါ ခွင့်ပြုရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
작성자: စိုးမိုးသူ 시간: 오전 5:53
ရွှေ့ပြောင်းသူကမ္ဘာ အသံလွှင့်ဌာနသို့
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး သတင်းထောက် ဖြစ်ပါတယ်
ကိုရီးယားတွင်း နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရင်း လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့ အခြား သက်ဆိုင် ရာ သတင်းများကို ရွှေ့ပြောင်းသူအသံလွှင့်ဌာန မေးလ် smthu2006@gmail.com သို့မဟုတ် 010 7155 6581 သို့ ဆက်သွယ် သတင်းပေးခြင်း၊ မိမိ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သတင်းကို ပေးပို့ပေးခြင်းဖြင့်ကိုရီးယားတွင်း နေထိုင်သူ ရွှေ့ပြောင်းသူများဘ၀ သာယာစေရေးအတွက် ကူညီကြပါ။
ကိုရီးယားက မြန်မာများသတင်း (10)
အီးပီအက်စ် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ (7)
စစ်တမ်းမှ တဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသို့ (သင့်အဖြေသည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတို့ ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက်)
ကိုရီးယားက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဘ၀ကို ကျေနပ်မှုရှိပါသလား?
လအလိုက် သတင်းများ 10월 (1) 9월 (3) 8월 (2) 6월 (8) 5월 (8) 4월 (12) 3월 (19) 2월 (10) 1월 (4) 12월 (17) 11월 (6) 10월 (18) 9월 (10) 8월 (38) 7월 (19) 6월 (13) 5월 (24) 4월 (3) 3월 (7)
"အမောဖြေလိုသူများအတွက် အမောပြေ" - - အိမ်မှ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး သောက်သုံးဖို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၀ယ်ယူလိုသူများ - ဆိုင်မှ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး ရောင်းချဖို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၀ယ်ယူလိုသူမျာ...
အားလပ်ရက် အလှူ ကြွရောက်ပါရန် - သန္တိကရဝိဟာရ ကိုရီးယား ကောက်သစ်စားပွဲ အားလပ်ရက် အလှူ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု ကောက်သစ်စားပွဲ အားလပ်ရက်မှာ ကိုရီးယားတွေက တော့ မိသားစု တွေ့ဆုံကြ စားသောက် ပျော်ရွှင...
ကွန်ပြူတာ၊ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
FOOTBALL MANAGER 2011 | william hill | europalace casino | 7SULTANS CASINO | FX
MWTV Burmese News
Migrant World TV. 깔끔 테마. Powered by Blogger.